Ka soo qaad iskuduwaha 'AutoCAD' faylka 'Excel CSV' - Geofumadas
Sawirrada isku-dhafan ee AutoCAD laga bilaabo faylka CSV Excel
Nofeembar, 2017 AutoCAD-AutoDesk, cadastre, topografia
Waxaan tagay berriga, waxaan kor u qaaday wadarta 11 ee hantida, sida lagu muujiyay sawirka.
7 ee qodobbadaas, waa xuduudaha badan ee banaan, afarna waa geesaha guriga la dhisay.
Markii aan soo dejinayo xogta, waxaan u beddelay feyl kala-go'an, oo loo yaqaan 'csv'. Sidaad u aragto, iyagu waa iskuduwaha UTM.
Hadda waxa aan rabo waa in la soo dejiyo qodobbadaas AutoCAD, si aan u abuuro goobo iskudubarid iyo tilmaame taasoo iigu calaamadeysa waxa xajmiga uu ku saabsan yahay sida soo socota:
Xudduudda 375107.4 1583680.71
Xudduudda 375126.31 1583600.06
Xudduudda 375088.11 1583590.62
Xudduudda 375052.78 1583624.39
Xudduudda 375057.36 1583616.43
Xudduudda 375108.43 1583578
Xudduudda 375153.07 1583630.59
Haddii wadarta isku dhufashadu ay ka muuqato calaamadaha 130, oo leh walxo kala duwan, sida geedaha, xuduudaha, dhismayaasha ama qodobbada tixraaca, waxaan hubaal ahaan dooneynaa inaan ku sameyno arjiga.
Faylka CSV ayaa lagu soo saari karaa iyada oo la adeegsanayo 'Excel' oo tilmaamaysa "badbaadi sidii" iyo xulashada ikhtiyaarka qoraalka ah ee lagu kala saaray calaamadaha. Faylka waa inuusan laheyn saf madax ah.
Xaaladdan, waxaan ku sameeynayaa codsiga csvToNodes, oo ka socota AutoDesk App Store. Barnaamijku wuxuu u dhigmaa hal doolar, oo laga iibsan karo PayPal. Markaad soo dejiso oo rakibto, waxaa lagu soo bandhigaa tabka Add-ins, ama waxaa lagu fuliyaa amarka qoraalka CSVTONODES. Xaaladdan oo kale, waxaan isticmaalayaa AutoCAD 2018, in kasta oo codsigu ka socdo nooca AutoCAD 2015.
Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto waddada faylka csv, tilmaan in ay kala soocaan saliida oo ay doortaan miisaanka baqshadda, haddii ay dhacdo in ay ka soo baxaan qiyaasta aan ku haboonayn sawirka.
Waana intaas, halkaas waxaan ku leenahay isku-duwaha UTM, sida baloogyo, oo leh tilmaanta la tilmaamay. Halkan waxaad ka heli kartaa soo qaado faylka csv Tusaale ahaan inaad isku daydo.
Haddii aad qabto wax dhibaato ah oo fulinaysa, ha ilaawin inaad ka tagto faalladaada.
Post Previous" Hore Sida loo soo dejiyo AutoCAD 2018 - nooca waxbarashada
Post Next Arag iskuduwaha Google Earth ee Excel - una beddel UTMNext »